/Blog/Sibutramine hcl/Iyo inoshandiswa zvakanyanya kurasikirwa kweropa: Sibutramine powder (Meridia)
Posted on 09 / 13 / 2018 by Dr. Patrick Young akanyora Sibutramine hcl. Izvo zvine 65 Comments.
Kuwedzera muviri kunowedzera njodzi yehutano hwakakomba, kusanganisira chirwere cheshuga, chirwere chemwoyo, chirwere chemaitiro, uye mamwe marariya. Kurasikirwa uwandu sechikamu chekutarisira masero kunogona kubatsira zvikuru kuderedza dambudziko rezvirwere izvi zvinogona kuuraya. Kana iwe uri kunyanya kuwandisa kana kuora, unofanira kufunga kuwedzera Sibutraminekupinda purogiramu yako yekugadzirisa uremu. Heino kuongorora kwedu kwakadzika kweSibutramine powder kukubatsira kuti uwane ruzivo rwakakosha pamusoro pechirwere ichi.
DRUG STRUCTURE MOLECULAR FORMULA CAS KUBHISISWA NUMBER
Chii chinonzi Sibutramine
Sibutramine is a kuonda chiremba chinoshanda sechido chinodzvinyirira. Izvi zvinodhaka zvakatengeswa pasi pemazita emhando dzakasiyana, kusanganisira Meridia powder, Sibutrex, Siredia, uye Reductil. MuUnited States, mishonga yacho inorongwa pasi peChechi IV Dzakatongwa, uye yakagara ichishandiswa nenzira ye hydrochloride monohydrate salt.
Apo Sibutramine yakatanga kuumbwa, yakanga yakatarwa kuti ishandiswe seanorwarisa. Zvinosuruvarisa, mushonga uyu hauna kubudirira zvikuru pakurapa kuora mwoyo. Ichi chakaipa chaive, zvisinei, chikomborero pakuzvidzivirira kwevarwere vakawanda uye vanorema. Varwere vakaora mwoyo vakaona kuti mishonga iyi yakaderedza kudya kwekorori uye yakaderedza kudya, saka yakavabatsira kupera simba. Muna 1997, Sibutramine yakagamuchirwa neDDA kuti ishandiswe semishonga yekurasikirwa nekurema muUnited States.
Action Mechanism yeSibutramine
Sibutramine inonzi inogadzirwa ne2 inobata metabolite - didesmethyl Sibutramine powder (M2; BTS-54505) uye desmethylsibutramine (M1; BTS-54354), ine simba rakakura seMMIs.
Sibutramine (uye Metabolite)
Maitiro ndea Ki(nM).
Mune vanhu, Sibutramine powder, iyo inonzi monoamine reuptake inhibitor, inoderedza kuwedzerwa kwemamwe zvinhu pane mamwe mazinga. Somuenzaniso, inoderedza dopamine ne16 muzana, serotonin ne54 muzana, uye norepinephrine ne73 muzana. Mukuita kudaro, huwandu hwezvinhu izvi mumasikirati emu synaptic huwedzerwa, saka zvinobatsira kuwedzera satiety.
Fenfluramine uye amphetamine ndeyekare anorectic agents anomanikidza kubudiswa kwevashandi veeurotransmitter, panzvimbo pekukanganisa reuptake yavo. Hazvizivikanwe kune mamwe serotonergic zvinodhaka zvinoderedza chido chakadai se fenfluramine, sibutramine pamwe chete nemasabolites ayo ane zvishoma uye zvisingabviri zvinyanyobatana zve 5-HT2Creceptor.
Panenge ne77 muzana yeSibutramine yakanyatsopindirwa kubva pamatumbo emimba. Zvisinei, mushonga uyu unosangana nehuwandu hwekutanga-metabolism, kuderedza kushandiswa kwayo. Chirwere ichi chinowana chikwata chayo cheplasma pashure peawa imwe chete. Iyo inewo hafu yehupenyu yeawa imwe.
Kushandisa Sibutramine powder
Sezvo Sibutramine yakawanikwa ichibudirira pakudzivisa kudya, yakashandiswa sekurasikirwa kwehutachiona nevarwere vane zvinetso zvakakomba zvehutano. Kana inotorwa, Sibutramine inokonzera kukanganisa pamakemikari ari muuropi ayo anokonzera kuisa muviri.
Kana iwe uri kutarisana nenharo ipi neipi inorema-soro yakadai sekumanikidzwa kweropa, high cholesterol, kana chirwere cheshuga, zvinokurudzirwa kuti unobatanidza Sibutramine nedzimwe nzira dzekutarisira kuenzanisa sekudzidzira uye kudya.
Pakave nekuwanda kwezvidzidzo zvakarongeka zvakagadziriswa zvinotarisirwa kuongorora kuora kwekurema kwechiitiko chebhakramramine. Mune chimwe chekudzidza, 1047 vakazvipira vakawanda vakagamuchira maitiro akasiyana e placebo kana sibutramine kwenguva yakareba kwemwedzi mitanhatu. Nheyo yekutanga yekurasika ne placebo yaiva 2.7 muzana, 7.4 muzana ne 25 milligram / zuva, 6.1 muzana ne 10 milligram / zuva, uye 3.9 muzana ne 5 milligram / zuva.
Mune imwe yedzidzo yakapedza mwedzi mitanhatu, sibutramine kana placebo yakashandiswa pamwe chete nemafuta e-low calorie. 86 muzana yevaya vakatora sibutramine vakakwanisa kurasikirwa kwete pasi pe5 muzana yehutatu hwavo hwekutanga. Kana vari avo vakatora placebo, vakakwanisa kurasikirwa ne55 muzana. Mumwedzi ye12 yakaramba ichishandiswa, 75 muzana yevaya vakashandisa sibutramine vakaramba vachirasikirwa, vachienzaniswa ne42 muzana yevaya vakatora placebo.
Mune rimwe dambudziko rakagadziriswa rinoshandiswa rinosanganisira 605 vanozvipira, imwe nzira yakashandiswa kuedza. Vazvipiri vakapiwa 10 milligram ye sibutramine zuva nezuva pamwe nekudya zvakaderera zvakanyanya. Vaya vakakwanisa kurasikirwa nekunze 5 muzana yehutatu hwavo hwekutanga hwakatorwa kuti varambe vachitora placebo kana 10 milligrams ye sibutramine zuva rega rega kweimwe mwedzi 18. 80 muzana yevaya vakatora sibutramine vakakwanisa kuchengetedza kuora kwavo, vachienzaniswa ne16 chete yezana yevaya vakatora placebo.
The recommended sibutramine dosage inonzi 10 milligrams pazuva, iyo inofanira kutorwa nemuromo.
Zvichienderana nekutenda kwako kana kukanganisa kwechirwere ichi, chiremba wako angashandura chiremba chako kuti ave nechokwadi chokuti iwe unowana mhinduro dzakanakisisa.
Semuenzaniso, chiremba wako anogona kugadzirisa chirwere chako chezuva nezuva ku 5 milligrams kana kusvika ku 15 milligrams pazuva.
Zvakakosha kucherechedza kuti kushandiswa kweSibutramine kunofanira kunge kwakakwana kune makore 2.
Kuchengetedza pakutora Sibutramine powder
Kune dzimwe nguva apo Sibutramine isingafaniri kushandiswa. Dzinosanganisira:
Usatora Sibutramine kana iwe uri muduku kudarika 16 makore kana kupfuura kudarika 65 makore.
Unofanirwa kurega kushandisa Sibutramine kana iwe uchikurira unofanirwa kuita.
Iwe unofanirwa kuona zvakanyanya Sibutramine madhara, zvinokurudzirwa kuti iwe urege kutora kurasikirwa kwemishonga pakarepo.
Iwe haufaniri kutora chirwere ichi kana uine simba rakanyanya reropa.
Rega kushandisa Sibutramine kana une nhoroondo yekurohwa, chirwere chemwoyo, chirwere chetachiona, maronda emaguru, glaucoma, chirwere cheropa, chirwere chepfungwa, chirwere chetachiona chisingaiti, kubuda ropa, kana kuparara.
Dzivisa kutora mushonga kana uine chirwere chakanyanya chokudya chakadai sebulimia kana anorexia.
Zvaunofanira Kudzivisa paunotora Sibutramine
Izvi zvinotevera hazvifaniri kutorwa pamwechete neSibutramine:
Zvinokonzera kudya mapiritsi
Kucheka uye kutonhora kana mishonga yemishonga
Doro kana madhiragi.
MAO inhibitors - tranylcypromine, selegiline, rasagiline, phenelzine, isocarboxazid uye furazolidone.
Zvinyorwa uye / kana kupfuura-the-counter kuonda zvinogadzirwa
Usati watora Sibutramine, zvakakosha kuti iwe uudze chiremba wako nezvehupi hutano huri iwe huri kutambura kubva. Iwe unofanirwawo kuudza chiremba pamusoro pemishonga inopfuura-iyo-mishonga yemishonga yauri kushandisa ikozvino. Izvi zvinosanganisira migraine misoro yemishonga, marwadzo anorwadza narcotic, mishonga yekurwisa kana kutonhora, kana kuti zvinodhaka.
Kana iwe ukakundikana kurasikirwa nekunze 4 mapaundi mushure mokutora Sibutramine pamwe chete nekodori yakadyiwa kudya mushure memazuva eE4, ndezvokudya izvo iwe unoudza chiremba wako.
Zvaunofanira Kuita Kana Iwe Usisina Dose
Kuti zvive nemigumisiro yakanakisisa, zvinokurudzirwa kutora chirwere chako chezuva nezuva panguva imwe chete zuva nezuva. Kana iwe uchinge warasikirwa newaini, usafunga kunyange nezvekutora mishonga yakawedzerwa kuti uite nokuda kweiyo inorasikirwa. Pane kudaro, iwe unofanirwa kutora chirwere chacho pakarepo paunenge uchiyeuka, kana kudarika chirwere chakakanganwa kana iri nguva yechinangwa chairo chinotevera.
Zvaunofanira Kuita Kana Iwe Ukadarika Sibutramine powder
Kana iwe ukatora chikwata chepamusoro cheSibutramine pane chirevo chezuva nezuva chakakurudzirwa, unogona kuona zviratidzo zvekuwedzeresa zvakadai sekuzora, kutengesa moyo, uye musoro. Kana ukadarika kuSibutramine, zvakakosha kutsvaga kurapwa kwekukurumidzira kamwechete. Zvimwe, iwe unogona kudana nePoison Help Line.
National Library yemishonga, Institute of health, Sibutramine muchidimbu, peji 1-3
Nisoli E, Carruba MO (October 2000). "Kuongororwa kwekuchengeteka uye kubudirira kwebhakutramine, chirwere chinopesana nekuwedzera kwehupenzi ine nheyo yekuita".Kuwedzera kwekuongorora.1(2): 127-39.
Rothman RB, Baumann MH (May 2009)."Serotonergic zvinodhaka uye chirwere chemwoyo chinonzi valvular".Expert Opinion pamusoro pemishonga yekuchengetedzwa kwemishonga. 8 (3): 317-29.
Mhinduro ye65 Comments
Zvakanaka, ini ndichakutumirai email kuti musimbise mutengo.
Lusi10 / 10 / 2018 pa 7: 01 pm
Zvikuru izvo! Iwe unogona kutumira yako sibutramine urongwa ku email yedu ye offical: [Email akadzivirira]. Zvadaro AASraw saler achakurukura newe uye anotaura mamwe mashoko pamusoro pemadzora emu sibutramine. Kutarisa mberi kune kunzwa kubva kwauri!
Zvichida iwe unogona kuita izvozvo asi zvakaoma sezvatinoziva.Kukutanga, sibutramine haisi kuve kune dzimwe nyika.Secondly, zhinji dzezvitoro kutenga satibhitirine powder kubva kuchina muchitsiko chakatengesa uye kutengesa sibutramine munyika yavo semutengo wakakwirira. Saka ndinofunga kuti unogona kuraira sibutramine paIndaneti kana uchinge uwana kushaya kwekurenda kuraswa resouce. Tariro iyo inogona kubatsira zvishoma.
Hi Robert, mubvunzo wakanaka. Paunotora sibutramine zvisina kururama, Kurasikirwa kwako kwehutano hakuzovi pachena uye sibutramine migumisiro ichaunza dambudziko pamuviri wako. Saka ndapota tora sibutramine pasi pechiremba wako, saka pane imwe kuora kurasikirwa nemishonga. Ndatenda mubvunzo wako zvakare.
Mishonga chero ipi zvayo ine mararamiro ehupfumi, sibutramine haisi iyo. Sezvakangoita, sibutramine rakafu reupenyu ndeye 2-3 makore.
Izvo zvinonzwika zvikuru! Zvichida iwe unogona kutenga sibutramine nokuda kwake uye kutora sibutramine pasi pechiratidzo yakakodzera sibutramine, iye achazvinzwa zviri nani. Iwe uri murume akanaka.
Hapana chakakanganisika nekushandisa iyi mishonga sezvo iri FDA inogamuchirwa. Kunyange zvakadaro, avo vanoronga kurerutsa kurasikirwa poda vanofanira kutanga vadzidza pamusoro, uye ndinofunga kuti iyi nyaya chaiyo inobatsira kudzidzisa avo vanoda kutora Sibutramine.
Ndakakunda zvinetso zvangu zvinorema, asi ini ndakatya chaizvo kuti ndinogona kuwira pangoro uye kudzokera kumasuo angu anowanzopfuura. Iye zvino, ndinotora Sibutramine nguva nenguva sevheti yezvigadziro pakundibatsira kuti ndirambe ndichirasikirwa. Hapana chakaipa pakushandisa sibutramine, asi ndinofunga kuti zvingava zvakanaka kana pamwe chete nemararamiro anoshanda uye ane hutano.
Sibutramine Inonzwika sechirwere chakakosha zvikuru uye inoshanda zvikuru. Asi ini ndine mubvunzo nei wakasimbisa kuti Sibutramine inofanira kunge yakaderera kumakore ekushandisa kwe2?
Ndacherechedza kuti une mamiriro akaoma kwazvo ekutora sei sibutramine mushonga. Iko yakasimba sei iyo inogona kuva nayo kana yakatorwa sibutramine zvisina kunaka?
Iko sibutramine mifananidzo uye sibutramine mhinduro dzinoratidza kuti kushaya kurasikirwa kwemishonga kunobatsira sei. Ndinoda kuona zvimwe kana zvichinyanya kuwanda.
Wow, izvi zvinonzwika zvakakosha pakurasikirwa nekurema. Kurasikirwa kunokonzerwa nevaya vanotora Sibutramine vachienzaniswa nevaya vakatora placebo vaifadza zvikuru. Tinoonga nekugovana.
Ndinongoda kuziva kana ndinogona kutenga sibutramine munzvimbo yedu kunze kwekutenga sibutramine online.it zvichave zviri nani nenzira iyo.
Kubatsira kuparadzira rubatsiro rwaSibutramine nokuti ivo vanhu vazhinji vanoda chaizvo kurasikirwa nemutoro. Ndinovimba kuti ichavabatsira kurasikirwa mafuta mushure mekutora sibutramine.
Ndakanzwa zvakawanda zvekurasikirwa zvinodhaka zvinodhaka paIndaneti uye pasina. Kuverenga kuongorora kweSibutramine kunofadza.
Kutanga nguva yekunzwa nezvehupfu ino. Zvinotarisa sehutachiona hunorema kurasikirwa nemishonga. Izvi zvakakosha chaizvo kuedza vamwe sibutamine kurasikirwa nechimwe.
Zvinonakidza kuti mutumbi wega wega wega unogona kunge wakasiyana nenzira yekureruka kurasikirwa. Zvichida haisi pfungwa yakaipa kutarisa zviratidzo zvako zvinokosha uye mwoyo uchirova nguva dzose apo iwe unotora kurasikirwa kwemishonga.
Zvakanaka kuputsa rimwe nerimwe kuora kurasikirwa uye kuti vanorasikirwa sei. Zvakanaka kuti zvose zvakanyorwa kubva panguva iyo sibutramine mishonga inopinda muhutano uye zvose zvingwarira zvaunofanira kutora sibutramine kuitira kushandiswa kwezuva nezuva.
Kune avo vanovenga mishonga inokanganisa vanofanira kusarudza sibutramine nokuti inotorwa sibutramine orally iyo ndinoziva yakawanda yevanhu vakadai.
Mifananidzo yakaratidzwa peji ino yakanyatsokodzera uye ichabatsira uye yakakurudzira kuneta kudivi guru rekutora Sibutramine. Ndinotarisira kuti mufananidzo uripo uye unotibatsira kuti tirasike.
cess garate09 / 23 / 2018 pa 7: 11 am
Wow, Aya ndiwo mashoko akanaka kune avo vose vanotsvaka dzimwe nzira dzekurasikirwa. Ingotarisira kuti migumisiro yemigumisiro inogamuchirwa uye ndinofunga kuti kutenga sibutramine kutora mafuta angu.
Weightloss Mapurisa09 / 22 / 2018 pa 9: 31 pm
Ndapota cherechedzai, hutano nekuchena zvakakosha paunotenga sibutramine powder online. Hazvina kukwana kuti hazvina mari.
Sibutramine iyi inobatsira zvikuru kurasikirwa nemishonga inoita sechishuvo chinodzvinyirira. Yakagamuchirwa nevakawanda vevanhu munyika.
Sezvo ari mukadzi, ndinoda kuchengeta maitiro angu uye kugara zvakanaka. Ichi chinyorwa chinobatsira kwandiri zvino ndinoronga kuronga imwe sibutramine kwandiri uye ndinotarisira kuti chifananidzo chinogona kuva chaicho.
Ndinofunga kuti iyi pfupa yekudya haisi yezera uye zvepabonde, ini ndinoda kupa mwanasikana wangu nemurume kutenga imwe sibutramine. Ndingawana sei pfupa iyoyo?
Iko kusanyanya bioavailability uye iyo inogadzirisa pane neurotransmitter inonzwika zvikuru. Ndine chokwadi nekudya zvakasimba uye kurovedza muviri, tora sibutramine inogona kuva yakanakisisa.
FDA inogamuchirwa uye inowedzera zvibereko pashure pokutora sibutramine kweawa imwe ..! Ndinofunga ichi ichi chishamiso chemishonga. Kuona kushanduka kutsvaga mushure memavhiki mana hakusi zvakaipa.
Iko kune 1 sibutramine powder vapeji, kunyanya iri muAsia. Nzvimbo yepamusoro inopa nyika iri China (Mainland), iyo inopa 100% ye sibutramine powder maererano.
Sibutramine powder mishonga inozivikanwa zvikuru muSouth Asia, Domestic Market, uye North America.
Kuwedzera muviri kunogona kutungamirira kukufa kamwe-kamwe uye sevanhu vakadaro vane dambudziko iri havafaniri kukwanisa kuwana zvimwe zvezvidimbu zvinowedzera kurasikirwa nemutoro kunyanya kana mumwe nguva dzose ane nzira dzepanyama, tora uremu hwemishonga kurasikirwa nemuviri wako.
department09 / 22 / 2018 pa 5: 59 am
Sibutramine inofanira kutorwa maererano nemurairo asi paraadventure kudarika kunotorwa kune zvikonzero zvipi zvadaro chirwere chekurapa chinofanira kurongedza nokukurumidza.
Kana vanhu vakawanda vachiti izvi zvinobudirira ndinofungidzira ndaigona kutenga izvi kumukadzi wangu. Anoda kuora muviri uye ave akasimbiswa pamusoro payo asi haana nguva yekuita basa sezvo isu tose tiri kushanda muhofisi.
kuora kurasikirwa nemishonga kunonyanya kufarira munyika yangu uye ini nguva dzose ndinotarisira kuti inodya zvakanyanya asi muviri wangu uchiri kutarisa.
Ndakatora kuwanda kurasikirwa kwekugadzirisa mhinduro munguva yakapfuura. Iyi ndiyo mishonga yakashanda zvishamiso kwandiri uye ini ndinoda kuedza kuwedzera kurasikirwa kwepoda kuitira kuti ndionekwe zviri nani.
Ndinoona zvinonakidza kuti Sibutramine ine hukama hwakaderera hwe 5-HT2Creceptor inopesana nedzimwe kuora kurasikirwa nemishonga. Ndinenge ndichida kuziva kuti makemikari ose anochinja kubva kushandiswa kwezuva nezuva.
Zvinonakidza zvose zvinetso nematambudziko Sibutramine apfuura. Ndinofunga kuti 80 muzana yevashandisi vakakwanisa kuramba vakagadzirira yaiva inonakidza feat. Ndinotenda nekugovana! Shanduro yeSibutramine ichaunza zvikomborero zvakawanda zvekuwedzera.
Zvinotarisa kuti ndinoedza iyi "Sibutramine powder (Meridia)", munhu wose anoda kuva nemuviri wakakwana uye ane utano. Uye kuburikidza nemashoko akazara andinosvika pano, ndichaedza ... Handichazotambudziki nekuita zvisingabatsiri kudya. Ndokutenda zvikuru!
Sibutramine iri FDA inogamuchirwa, ndicho chikonzero ndinotora sibutramine pakutanga. Inonyatsobudirira kunyange zvichitora nguva nesimba.
Sibutramine yakanaka nokuda kwekureruka kwangu uye ndakawana zvakawanda kubva kuvana vachatora sibutramine.
Ndatenda mubvunzo wako, Sibutramine uye lorcaserin powder zvichava mazano akanaka ekutora mavara kubva musikana wako maererano nezvatinoona. Iwe unogona kutumira zviriritsiti ku email yedu ye-offical: [Email akadzivirira] kana iwe uchida kuedza vamwe kuti urasike uremu.
Zvose zvakabhedha mbatata dzinofanira kutora ichi chemishonga zvakanyanyisa uye kuona kuti vanogona sei kurasikirwa nehupfumi pasina kunyanya kushungurudzika kunyanya kune izvo zvisingabatsiri.
Kukuru kuziva zvakawanda nezve sibutramine powder uye ndiri kutora sibu powder ikozvino.
Handifungi kuti pachava nechimwe chinhu chinokuvadza pamusoro pekutora chero chekureruka kwekureruka kwechiremera sezvo yakagamuchirwa neDDA neJapan.Zvamwe izvi zvinowedzera zvinofanira kushandiswa kushaya kurasikirwa, nokuti vari kurasikirwa mafuta nokukurumidza. Kunyanya kuora kurasikirwa kudya chirongwa, unogona kupisa iwe mafuta nokukurumidza.
bhasi09 / 20 / 2018 pa 11: 42 pm
Uyu mushonga wakanaka wekurema ndakafanirwa kukurukurirana nawo nehutakiti rekurasikirwa unyanzvi uye hwakakurudzirwa zvikuru asi ndinofunga kuti unofanira kunge uchitungamirirwa nechiremba.
Rubheni Weru09 / 20 / 2018 pa 11: 25 pm
Ndiyo nyaya inofadza zvikuru yekubutramine. Zvinosuruvarisa, kushamwaridzana kwezvinodhaka nedoro mamwe mishonga inogona kunge yakaoma. Handizivi kuti chii chinoitika kana ndikasangana nekurasikirwa kwekureruka.
Captain U09 / 20 / 2018 pa 10: 34 pm
Kutaura chokwadi, ndiri kuwana zvakanakisisa zvokudya zvekurasikirwa nekurema asi nguva dzose zvinondirega ndichipenga. Nemhaka yokuti ndine uipi hwakaora kurasikirwa poda, naizvozvo ndinoramba ndichizvidya mwoyo pamusoro pemuviri wangu wakakora.
Mach09 / 20 / 2018 pa 9: 40 pm
Musikana wangu ari pfupi pamucheto wechubby. Zvichida, ndinogona kupa mazano ekurasikirwa nemishonga kwaari uye kumurega agare akanaka. Ndeipi uye rini ichatanga kuwanika?
Kubatana kweSibutramine kwe5-HT2Creceptor inzwi sezvinokosha kwazvo. Ndaiona ichi ichibudirira pamwe chete nekudya kwakakwana uye nguva yekuita basa. Ndinotenda nekugovana!
Zvinonakidza kuti mishonga iyi yakashandiswa pakurapa kuora mwoyo uye kuyerwa kwekushaya kwezvinhu kwakawanikwa nekukanganisa. Zvechokwadi zvakakosha kutora Sibutramine zuva rega roga uye kutevera kudiwa kweiyo.
Sibutramine anotarisa zvakanaka uye inoshanda zvakanaka maererano neshamwari yangu yakati. Ndinoda kuedza vamwe kana zvichibvira. Nokuti ndiri musikana ane mafuta uye ndinoda kuita shanduko.
Ndakanga ndichinzwa pamusoro pebbamburamine kwekanguva ikozvino. Asi ndinotya kuedza. Mushure mokuverenga nyaya ino, ndinofunga zvakakosha kupa mupfupa.
Sibutramine akandibatsira kurasikirwa nehuwandu hunorema asi hwakanga husina basa rakaoma. Iniwo ndakaramba ndakashanda mune zvekurovedza uye ndakaramba marudzi ose ezvokudya zvisina kudya.
Ndinovimba kuti ndichayeuka ruzivo urwu rwekutora nguva yose panguva imwechete zuva nezuva. Ndinofunga kuti chiitiko chakanakisisa, hachizoita kuti munhu akanganwe nyore nyore.
Muzukuru wangu muduku pane zvishoma uye ndakange ndoda kuratidza mum mama peji iyi ndisati ndaverenga avo vari pasiZ16 makore angatora izvi.izove zvichinyatsobatsira iye.
Ndinoda kuziva kuti ndingatora sei sibutramine maererano nemuviri wangu uye zviri nani kuderedza kurasikirwa?
Ndaiverenga imwe nyaya pamusoro pehurukuro iyi ikozvino saka ndinovonga nokuda kwezvimwe zvinyorwa. Handizivi kuti ndingaitei kuti ndive akatendeseka asi, zvisingaiti chubby vanhu van iye zvino vane sarudzo.
rumbidzo09 / 19 / 2018 pa 6: 45 pm
Ndinotenda kushandiswa kweSibutramine kunofanirawo kutariswa kunyanya kuti hazvibvumirwi kuitora kupfuura makore 2 uye mumwe anofanira kunge ave nechokwadi chokuti yakawedzera sibutramine muyero inofanira kugadziriswa nenyanzvi. Iwe wakapa ruzivo rwakanakisisa. Ndiri kufunga pamusoro pekuti ndinotenga imwe poda kuti ndibatsire kurasikirwa nebhumbu mafuta ikozvino.
yakanakisisa09 / 19 / 2018 pa 6: 36 pm
Ndinofunga kuti ndakaverenga nezve sibutramine mberi asi ini ndinofarira chokwadi chokuti inoderedza chido kuitira kuti tidzivise kuwana yakawandisa makori muhutano panguva yekutanga ipapo ini ndichiri kuchengeta maitiro akanaka kunyange ini ndave ndiine zvokudya zvakawanda.
Zvakakonzera kuputsa masvingo ekuwedzera uye maserosi. Zvinhu zvose zvinobatsira ini uye munhu wose anoda kuchengeta maitiro ake akanaka. Ndinotenda nekugovana!
Inonzwika semushonga unobatsira. Ndakaona kuti inoderedza sei serotonin uye dopamine mazinga zvakanyanya kufadza. Ndinotenda nekugovana!
Zvakanaka, ndinofunga kuti vakadzi vose vanofanira kuverenga nyaya ino. nokuti vakadzi chete ndivo vanongwarira maitiro avo uye vanoda kuziva kuti vangatanga sei kuora muviri, kunyanya kuti vangarasikirwa sei nehomba kumba nekurema kwekurema.
Ini ndinogona kumira ku sibutramine's kuora kurasikirwa nemigumisiro. Pakutanga ndakanga ndisinganyatsozivi nezvazvo asi pakupedzisira ndakapinda ndikaedza imwe sibutramine powder. Inzwa zvakanaka uye chimiro changu chinoratidzika zviri nani munguva iri mberi, ndine ruzivo rwemashoko.
Ndakamboedza marudzi ose ekureruka kwemaitiro ekurasikirwa kare. Iyi ndiyo chete mishonga yakanyatsoshanda kwandiri.
Iyi poda inofanirwa kutora kuora muviri.Ndichakurudzira Sibutramine kune wose anenge achitsvaka kurasikirwa nechiremera sezvo yakagamuchirwa naDDA, ndine chokwadi kuti zvakanakisisa pakurasikirwa kweropa.
Kuwedzera muviri kunenge kusina kunaka kubata, uye lorcaserin powder kuora kurasikirwa nemishonga ini ndinoiverenga iyo inobatsira kuora muviri.Ndinotarisira kuti iri nyore kusvika kune kutenga.
I7 Best Nootropics (Smart Drugs) mumusika we -Phenylpiracet 8 mibvunzo kuzvibvunza iwe usati watora Cetilistat powder
محمود on Sibutramine mutengo uye kutenga sei sibutramine powder
Mirco on Top 5 Makomborero ekushandisa Ostarine MK-2866 powder
Dr. Patrick Young on Iyo inoshandiswa zvakanyanya kurasikirwa kweropa: Sibutramine powder (Meridia)
Lusi on Iyo inoshandiswa zvakanyanya kurasikirwa kweropa: Sibutramine powder (Meridia)